Radio Don Bosco - Miray fo amin'i Mexique i Papa François
Nahatratra 7,5 Richter ny herin'io fihetsehan'ny tany io ary nahare izany avokoa hatrany amin'ny 700km manodidina ny foibeny. Olona 6 hatramin'izao no voalaza ho namoy ny ainy ary maro ny fahasimbana tamin'ny fotodrafitrasa samihafa ka isan'ny niharan'izany ny fiangonana. Isan'ny firenena efa notsidihan'i Papa François tamin'ny volana febroary 2016 moa i Mexique. Efa foana ankehitriny ny fampitandremana tamin'ny mety ho nisian'ny "tsunami" taorian'io horohorontany tany atsimon'i Mexique io. Matetika hitrangan'ny horohorontany io firenena io. Nanomboka ny taona 1985 no mankaty dia efa maherin'ny iray alina ireo olona namoy ny ainy vokatr'izany tany Mexique. Nahery indrindra tamin'izany ny horohorontany nitranga tamin'ny 13 septambra 2017, niteraka fahasimban-javatra maro ary nahafatesana olona niisa 360 sy naharatrana 6.000 hafa.